သင့် အသက် ဘယ်လောက် လဲ? ဘာနေ့မွေးလဲ? သာ မှန်မှန် ပြောပါ…မှန်လွန်း လို့ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ဖတ်ဖြစ် တဲ့ ဇနက ဟောကိန်း – Myanmar
October 3, 2020 admin Horoscope 0
မှန်လွန်းလို့ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ဖတ်ဖြစ်တဲ့ ဇနက ဟောကိန်း
ဘုရားအလောင်းတော် မဟာဇနကမင်း၏ ဖြစ်စဉ် ခုနှစ်မျိုး အခြေပြု၍ ရှေးဆရာကြီးများက တီထွင်၍ တွက်ကိန်းဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အလွန်လွယ်ကူရှင်းလင်း၍ ယနေ့ပညာရှင်များထိ သုံးစွဲနေသော တွက်ကိန်းဖြစ်ပါသည်။
တွက်ကိန်းအား ပုံသေကားချမယူပဲ မဟာဘုတ်စသော အခြား တွက်ကိန်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဟောပြောလျှင် အလွန်အစွမ်းထက်သော ဟောကိန်းဖြစ်သည်။
ဥပမာ – မိမိက တနင်္ဂနွေသားသမီး အခုရောက်သက် ၂၅ နှစ် ဆိုရင် တနင်္ဂနွေ ဇယားကွက်ထဲတွင် ၂၅ ကို ရှာပါ။ * နန်း * အကွက်ထဲတွင်ရှိ၍ ထိုအဟောကိုဖတ်ပါ။
မိမိက တနင်္လာသားသမီး အခု ရောက်သက် ၂၀နှစ်ဆိုရင် တနလာင်္ဇယားကွက်ထဲတွင် ၂၀ ကိုရှာပါ။ * ပျက်* အကွက်ထဲတွင်ရှိသောကြောင့် ထိုအဟောကိုဖတ်ပါ။
တည်ဆိုတာ သင်္ဘောတည်ဆောက်တာကို ပြောတာပါ။ လုပ်ငန်းတွေအတွက် ကြံစည်ဆဲ၊ လုပ်ငန်းတွေအစပြုဆဲ အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ ပြောတာပါ။ လုပ်ငန်းအတွက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ ရန်ရှာရာတွင်လွယ်ကူလိမ့်မည်။
လုပ်ငန်းအကြံ အစည်အောင်မြင်မည်။ အလုပ်ရှာနေလျှင် အလုပ်ရမည်။ အလုပ်လျှောက်ထားလျှင် အလုပ်ရမည်။ အမှုကိစ္စတွေ၊ အလုပ်တွေများမည်။ ငွေဝင်များသလို ငွေထွက်လဲများမည်။
ထွက်ဆိုတာ ဇမ္ဗန ဂိုရ်ပြည်က သင်္ဘောစထွက်တာကို ပြောတာပါ။ ကောင်းမွန်သောမိတ်ဆွေသစ်များ တိုးမည်။ စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ လုပ်ရမည့်အချိန်ကောင်းပါ။ ပြည်တွင်း၊ပြည်ပခရီးများ သွားရမည်။ နိုင်ငံခြားကုန်လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်မည်။
ပျက်ဆိုတာ သင်္ဘောပျက်သွားတာကို ပြောတာပါ။ ကံဇာတာ ညံ့ချိန်ပါ။ စီးပွားရေးကျဆင်းမယ်။ သူများမကောင်းကြံတာခံရတတ်သည်။ မတော်တဆထိခိုက်မှု အသေးအဖွဲများ ကြုံတတ်သလို သေကောင်ပေါင်းလဲဝေဒနာများ ဖြစ်တတ်သည်။ ရာထူးလုပ်ငန်းကိုနှောင့်ယှက်မည့်သူ ပေါ်လာလိမ့်မည်။ အိမ်ထောင်ရေးကို အထူး သတိထားပါ။
ကျောက်ဆိုတာ မေခလာနတ်သမီးက ကျောက်ဖျာထက်မှာတင်ပေးထားတဲ့ ကိန်းဆိုက် ပြီဆိုတော့ ကံကောင်းပြီလို့မှတ်ပါ။ မမျှော်လင့်ပဲကူညီမယ့်သူတွေပေါ်မယ်။ အောင်ပါလေသိန်းထီဆုကြီးများ ပေါက်မယ်။ မကျန်းမမာဖြစ်နေရင်တော့ ပြန်ပြီးကျန်းမာလာမယ်။
ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ပြီလို့ဟောပါ။ အမှုရှိရင်ရှိနိုင်မည်။ အချုပ်နှောင်ခံနေရရင် လွတ်မည်။ ကျဆင်းနေသော စီးပွားရေးများ ပြန်တက်လာမည်။ ပညာရေးလဲကောင်းမည်။ အိမ်ထောင်ကျလျှင် အိမ်ထောင်ဖက်ကောင်းနှင့်တွေ့ပြီလို့ဟောပါ။ အကြံအစည်များ အောင်မြင်မည်။
ထီးဆိုတာ ထီးဖြူဆောင်းတဲ့ကိန်းပါ။ နာမည်ကျော်ကြား ထင်ရှားမည်။ ကောင်းသတင်းနှင့် ကျော်ကြားခြင်းပါ။ ဆုလာဘ်တွေရမည်။ ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးများ ရမည်။ စာမေးပွဲဖြေထားရင် စာမေးပွဲအောင်မည်။ ရာထူးတိုးမည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ရမည်။ အိမ်သစ်ဆောက်ကိန်း၊ အိမ်သစ်ရကိန်းပေါ်မည်။
နန်းဆိုတာ နန်းအပ်ခံရတဲ့ကိန်းပါ။ ကံဇာတာကောင်းပြီလို့ဟောပါ။ ရာထူး တိုးမည်။ စီးပွားဖြစ်ထွန်းမည်။ အမွေအနှစ်တွေရမည်။ အပြိုင်အဆိုင်တွေမှာ အနိုင်ရမည်။ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရင်နိုင်မည်။ အိမ်ထောင်ကျကိန်းရှိသည်။ အိမ်ထောင်ကျလျှင်လဲ ကံကောင်းမည်။ အလှူပြုလုပ်ရမည်။ မင်းစိုးရာဇာ အကြီးအကဲဖြစ်မည်။
စံဆိုတာ မင်းစည်းစိမ်ကိုခံယူရတဲ့ကိန်းပါ။ ဘေးအန္တာရာယ်ကင်းပြီး စုတ်ကြီး၊ လာဘ်ကြီးတွေဝင်မည်။ လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်မည်။ ကြီးမားတဲ့ရာထူးတွေရမည်။ သိုလှောင်ပစ္စည်းတွေက အကျိုးအမြတ်ရမည်။ အခြွေအရံမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း တိုးမည်။ ငွေကြေးစုဆောင်းမိမည်။
ယခုအဟောတမျိုးထဲနှင့် ပုံသေယူ၍မရပါ။ မသိသေးသူများ သိစေရန် ရည်ရွယ်၍ ကူးယူရေးသားပါသည်။
ဂျပန်တွေ ရေချိုးတဲ့ ပုံပြင်လို ဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာပြည်က (Social Distancing) ခပ်ခွာခွာနေခြင်း